राति बारम्बार पिसाब लाग्ने समस्या के हो ?:: Naya Nepal
राति बारम्बार पिसाब लाग्ने समस्या के हो ?
एजेन्सी – जापानी डाक्टरहरूले राति बारम्बार पिसाब फेर्नुपर्ने व्यक्तिले भोजनमा नुन (सोडियम) को मात्रा कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्। एउटा अध्ययनपछि उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
राति दुईपल्ट पिसाब फेर्नेहरूले भोजनमा नुनको मात्रा कटौती गरेपछि एक पल्ट मात्र पिसाब लागेको बताए। यसको प्रभाव दिउँसो पनि देखियो र 18मा समेत सुधार आयो।
काठमाडौं–नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा ल्याउन अनिच्छुक देखिएका छन्। पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले महराले अदालतबाट सफाइ पाइसकेको स्थायी कमिटीमा ल्याउन इच्छा राखेका छन् । तर, ओलीले महराको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै रोकेको महरानिकट एक नेताले बताए।
अध्यक्ष प्रचण्डले महरालाई यसअघि असोज ५ गते पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकबाट स्थायी कमिटीमा ल्याउने तयारी गरेका थिए। तर, अर्का अध्यक्ष ओलीले दुई अध्यक्षले थप छलफल गरेर मात्रै स्थायी कमिटीमा ल्याउने भनेपछि रोकिएको थियो।
सभामुख हुँदा महराले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गराउन सहयोग नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट थिए। त्यहीँ विषयलाई प्रधानमन्त्रीले इगो बनाएकाले महरालाई स्थायी कमिटीमा ल्याउन समस्या भएको हुन सक्ने महरा निकट नेताहरुको विश्लेषण छ।
तर, महरानिकट केन्द्रीय सदस्य हेमराज शर्मा ‘डायमण्ड’ले ‘महरा सर’ स्थायी कमिटीमा छिट्टै आउन सक्ने बताए। ‘महरा सरलाई स्थायी कमिटीमा ल्याउन प्रचण्ड सकारात्मक हुनुहुन्छ। अर्का अध्यक्ष पनि सहमत भए उहाँलाई स्थायी कमिटीमा ल्याउन समस्या हुँदैनहोला,’ शर्माले भने, ‘गत असोज ६ गतेको सचिवालय बैठकले एकताका बाँकी कामसँगै पार्टी नेताहरुको कार्यविभाजन समेत टुंगो लगाउने भनिएकाले त्यसैमा महरा सरबारे प्याकेजमा टुंगिन सक्छ।’
महरा माओवादी पार्टीमा हुँदा सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारीमा थिए। वाम गठबन्धनबाट महरा सभामुख भएका थिए। संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि यौन दुराचार गरेको आरोप लागेपछि गत असोज १४ गते सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यहीँ विषयमा मुद्धा परेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत फागुन ५ गते निर्दोष सावित गरी सफाइ देखिएको थियो।